Dad rayid ah oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay Kismaayo iyo baaritaano hadda ka socda halkaas – Radio Daljir
Dad rayid ah oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay Kismaayo iyo baaritaano hadda ka socda halkaas
Agoosto 16, 2013 3:23 b 0
Kismaayo, August 16, 2013 – Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada hoose, waxay sheegayaan in ay halkaasi ku dhinteen labba qof oo rayid ah, kadib qarax ka dhacay xerada farjano ee magaaladaas.
Labbada qof ee geeryooday oo rayid ahaa ayaa la socday gaari nooca Toyotada loo yaqaano ah, waxaana la qaraxday miinada baabuurka ay saarnaayeen.
Wararku waxay intaas ku darayaan in labbada qof uu jirkooda goo?go?ay, dad goob joogayaal ah oo aan magacooda shaacin ayaa sidaasi war-baahinta u sheegay.
Ciidamada Jubbaland ayaa gaaray goobta iyagoo durba bilaabay howgalo ay dadku qab-qabanayaan, waxayna baadi goob ugu jiraan dadkii ka dambeeyey miinadaasi dhulka lagu aasay ee rayidka waxyeelaysay.
Kismaayo waxaa ka socday toddobaadyadii tegey howgalo baaritaano ah oo ay wadaan ciidamada maamulka Jubbaland ee Kismaayo, waxayna daba socdeen howgaladu kadib qaraxyo is xig xigay oo halkaas ka dhacay.
USA oo joojisay xiriirkii ku salaysnaa taageerada Meleteriga ee ay siin jireen dowladda Masar
Drs, Maryam ? Go?aanka MSF wuxuu aad u taabanayaa carruurta iyo haweenka xanuunsan ee dalka?